Hlukanani phansi noMinnie Dlamini | News24
Hlukanani phansi noMinnie Dlamini
Cape Town - Ngicela baphakamise izandla bonke abangayiholi imali yeqolo bebe bezele - eish, babili kuphela.
Ngicela baphakamise izandla abangazele - 1, 2, mmhhhu babili kuphela nala!
Okokugcina, ngicela baphakamise izandla abangakaze baphuphunyelwe yizisu, 1,...abekho abanye abaphakamisayo, okusho ukuthi uyedwa kuphela.
Angeke ngisho lutho ngabathatha isinqumo sokuthi bahushule.
Okay, sonke sesibonile ukuthi bambalwa kangakanani abesifazane abangazele nabangakaze bavelelwe wumshophi wokuthi "baphuphunyelwa yizisu".
Uma-ke kunenhlekelele engaka yabesifazane abangaphelele ebuntombini babo, unyuswa yini ushukela kubantu uma umndeni wakwaDlamini ukhetha ukubonga uphinde uqhakambise indodakazi yawo?
Kakade uMinnie Dlamini simazi engazele futhi asikhumbuli sizwa kuthiwa uhushule isisu noma simchithekele.
Ngiyabuza futhi, ningenaphi uma abazali bakhe bemkhulisa ngendlela abamkhulisa ngayo.
Ngokwami ngingathi mhlampe kube nokudideka egameni lomcimbi abawenzile, njengoba bethe umhlonyane, njengoba ngazi umhlonyane wenzela itshitshi elisanda kuthomba.
Ngolwazi enginalo, ngikholwa wukuthi bekungezwakala kangconywana ukube kuthiwe umemulo, wona owenzelwa noma ubani noma angaba ngakanani.
Senikhulume kwanwebeka imilomo, nithi uMinnie "bamqedile", akasayiyo intombi, ubani vele obethe uyintombi?
Ubani othe umemulo wenzelwa intombi-nto?
Njengayiphi ingane ehamba iyotshela abazali bayo ukuthi sebeyigqekezile? Angithi phambilini kwakubonakala umayihlokoza esigcawini, uma kugqashuke unhlwehlwe, bese kuba yizona zinkomba zokuthi ingane ayisagcwele.
Kulula ukukhuluma izindaba zabantu uma ezakho zingaziwa, asifunde ukuzithiba, sike nje sithule njengomuntu osebhukwini.
Abanye bayenzelwa umemulo noma sebezele, lo mkhuba awuhlangene neze nobuvajini. Kungenzeka ukuthi awuyizwisisi kahle eyokukhuluswa kukaMinnie, vele akusiyo eyakho, phuma kuye!
Okuyikho ekumele kukubuse ukuthi yonke ingane iyigugu kubazali bayo futhi iyisibusiso, kwawena imbala yize unje.....
Ngiyamhalalisela uMinnie ngokunika abazali bakhe isizathu sokuthi bamjabulise ngale ndlela.
Nina maZulu engicwele umona enikhuluma ningenakho ukuqonda nisihlanganyele nezizwe, sengathi beningazihlupha ngokufunda izinto zethu kwaZulu, bese kuba yithi esifundisa izizwe noma zisihleka, siphinde nathi sizondle ngolwazi.
N.B - Ngikhulele kwaMashu, ulwazi enginalo ngemikhuba yesintu, ileyo engihamba ngiziqoqela mina, ngalokho angiziboni nginegunya lokugxeka ukuthi ubani wenze kahle noma cha.
Okunginyusela uwoyela, yinzondo eqhutshwa abantu bebekana amabala besho bengenalo nolwazi olugcwele!